Kusimaha madaxweynaha JFS ahna guddoomiyaha Golaha Shacabka oo qaabilay Danjiraha Qatar ee Soomaaliya – Radio Muqdisho
Kusimaha madaxweynaha JFS ahna guddoomiyaha Golaha Shacabka oo qaabilay Danjiraha Qatar ee Soomaaliya
Kusimaha Madaxweynaha JFS ahna guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal sheekh C/raxmaan ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka dowladda Qadar ee Soomaaliya Amb. Xasan Xamza.
Kulanka waxaa loogu hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood iyo
Sidoo kale kulanka waxa loogu hadlay wada shaqeynta baarlamaanada labada dowladood ee Qadar iyo Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa.
” Mudane guddoomiye waxa marka hore hambalyo iyo salaan kaaga wadaa guddoomiyaha baarlamaanka Qadar, dowladda Qadar waxay balan qaadeysaa iney dhinac walbo ka taageereyso golaha shacabka, waxa ka shaqeynaya sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta labada baarlamaan “. ayuu yiri: Safiirka.
”Dowladda Qadar waxa ay qeyb weyn ka qaadaneysaa hormarka dalka ka socdo, barnaamijyo hormarineed oo shacabka wax weyn u tari doono mustaqbalka ayay dalka ka wadaa” ayuu yiri: guddoomiyaha golaha shacabaka.
ugu danbeyntii Guddoomiyaha ayaa safiirka kaga mahad celiyay dadaalada uu ku xoojinayo xiriirka labada dowladood iyo labada baarlamaan.
Maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in la dhameystiray qorshaha Diiwaan galinta Ciidamada daraawiishta (Dhageeyso)
Macalinka Banaadir SC Hussein Mbalangu oo dalka dib ugu soo laabtay